Umkhuleko kuSan Ramón Nonato? Ukuthula Imilomo Nabesifazane Abakhulelwe [+]
Umkhuleko kuSan Ramón Nonato Yisikhali esihle kunazo zonke sabesifazane abakhulelwe ngoba saziwa njengomunye wabangcwele abasiza ikakhulukazi labo abakhulelwe.
Vele angacelwa ezinye izinto yena, ngaphandle kwesimo, azongenelela ngathi.
Imikhuleko inamandla amakhulu, asikwazi ukubukela phansi amandla abo.
Abanye balahlekelwe ukukholwa futhi kungenxa yendlela esezweni namuhla kepha ukuphela kwethemba esinalo akudingeki lilahleke.
Ngo umkhuleko singenza konke kube ngcono futhi uma kunezimo eziqinile empilweni, singaphephela kuyo ukuze sithole amandla siqhubeke nendlela.
1 Umkhuleko kuSanta Ramón Nonato Ungubani?
1.1 Umkhuleko kuSan Ramón Nonato ukuvala imilomo
1.2 Umthandazo weSan Ramón Nonato wokulwa nokuhleba
1.3 Kwabesifazane abakhulelwe
Umkhuleko kuSanta Ramón Nonato Ungubani?
Igama lesidlaliso elithi non natus, okusho ukuthi lingakazalwa.
Kwanikezwa ngoba umama walahlekelwa yimpilo yakhe ngaphambi kokuba iSan Ramón ibone ukukhanya kwezwe elisha elalizokumemukela. Lesi ngesinye sezizathu esenza abe ngomunye wabangcwele kwabesifazane abakhulelwe.
Indaba yakhe ibuyela emuva ngonyaka ka-1200 lapho sekuyisikhathi sokuzalwa, ngemuva kokuba esekhulile ukholo lwayo olungagugi lwamthatha wamyisa e-Afrika lapho asiza khona abaningi njengabasindisi abathumbi.
Injongo yakho eyinhloko wanikela egameni lezinye iziboshwa Babesesimweni esibi kakhulu.
Ngemuva kokuhlukumezeka kabi imantshi efanayo iyalele ukuthi kubhekane kangcono nomqondo wokuthola usizo oluhlelelwe.
Kodwa-ke, iSan Ramón Nonato yayinesibopho sokulandela ukushumayela nokusiza labo ababekudinga kwathi nje lapho imantshi imgweba ukuba afe, isigwebo esagwemeka ngoba bayikhokha inhlawulo yakhe base bekhululwa.
Umkhuleko kuSan Ramón Nonato ukuvala imilomo
I-Holy Ramon Nonato ngamandla onawo nokuthi uNkulunkulu ukunikeze ukuthi unginike engikucela ukuthi ubeke ukhiye emlonyeni kulabo abafuna ukungiphatha kabi.
(Yisho igama lomuntu / abantu)
Abantu abakhuluma kabi ngami noma abanendaba nami embi, bafuna ukungifaka ebubini, ngikhanyisa leli khandlela ukuvala imilomo yakho.
Futhi uyakufeza engikubuza kona, ngoba ushumayele ngezwi likaNkulunkulu, kubekiwe njengokufela ukholo ukuphatha ukhiye emlonyeni wakho.
Lalela umkhuleko wami uSamuon Ramon Nonato ukuthi athule imilomo futhi akhulumele phambi kukaNkulunkulu uBaba kulabo abakhuluma kabi ngami abayeke emzamweni wabo uNkulunkulu onamandla onke akuphe.
Isifiso esivuthayo sokukhulula izigqila, ngaso sonke isikhathi singiyekisa ezilimini ezimbi, ezitheni nasekunikezelweni.
Kulabo abafuna ukungilimaza, ngenze ngiphile ngokuthula futhi ngihlukane nabo bonke abangizondayo nabangihluphayo.
Ukuthi ngenxa yomona, ububi noma intukuthelo, ngifuna ububi obuthile kulabo abafuna ukungihlambalaza ngokunyundela kwabo, iSan Ramón Nonato.
Ngobuhle bakho obukhulu, ungasishiyi isicelo sami ungagadli ngiyakuncenga ngeNkosi yethu uJesu Kristu.
Uma ufuna ukuvala imilomo, lo ngumthandazo ofanele weSan Ramón Nonato.
Izwi likaNkulunkulu lixwayisa ngokuthi liyingozi kangakanani kungaba lulimi lwesintu, ukuphawula kuvame ukubulala okungaphezu kwesibhamu.
Lokhu kungenxa yokuthi isonto lamaKatolika futhi indawo kaKristu sonke sikholwa ukuthi iSan Ramón Nonatos ingasisiza ukuthi sithulise leyo milomo evulekile isenza kabi ngendlela enkulu.
Lesi yisinyathelo esinokuthula lapho sibhekene nalesi senzo esilimazayo ngoba asinqumi ukuziphindisela, kepha sicela ukuthi kube ngongcwele obhekele ukuthulisa labo abasilimazayo.
Umthandazo weSan Ramón Nonato wokulwa nokuhleba
O, uSimon Ramon Nonato odumile, wena, ngokuyala izwi likaNkulunkulu, ukwabe ngokuhlushwa ukuba uthwale ukhiye emlonyeni wengxoxo.
Yizwa imizwa yami futhi ungenelele phambi kukaNkulunkulu iNkosi yethu ukuze labo abakhuluma kabi ngami Ngiqede ukuzama kwabo futhi ngivikeleke kunoma yimuphi umyalezo omubi noma olimazayo ...
Ngiyacela, Nkulunkulu wami Ophakeme, onikeze iSaint Ramon Nonato isifiso esijulile sokukhulula izigqila, ekufunela ukulamula kwakhe.
Kwangathi ungangihlala ungisusa ekuzithobeni, esonweni esihlukanisa nami, nokuthi ngiphumelele ngokuthula futhi ngisele ngemuva kwabo bonke abangihluphayo bangihluphe.
Ukuthi ukwazile ukwahlukaniswa naphakade nabaphikisi, noma, noma yikuphi, ukuhlukahluka noma intukuthelo, angifisele okubi.
Noma bafuna ukungilimaza ngehlazo labo.
Nkulunkulu menzi, ngiyabona ukuthi wena ngesihe sakho esikhulu, futhi ngokungenelela kwe-Saint Ramon Nonato, ngeke ushiye isicelo sami sidelelekile.
Ngiyakuncenga, ngendalo yakho, uJesu Kristu, iNkosi yethu ethandekayo, futhi obusa nawe kulo lonke uMoya oNgcwele uSamson Ramato Nonato.
Wena, ohlala eduze kakhulu noNkulunkulu, umbuze ubunzima bami, ukuthi angikaze ngivikele ukuvikelwa nokuvikela kwakho, ukuthi izokhulumisana zakho ezidumile zingisize kuyo yonke iminithi emibi nangobunzima.
Ukuhleba kubi okuvame ukulimaza umndeni, ubungane noma imvelo yomsebenzi. Ukudumazeka okuningi nokulimala kobuqili kangangokuba asiqapheli kuze kube yilapho ububi benziwe.
Umkhuleko weSanta Ramon Nonato ngokumelene nokuhleba Kuyasiza ukuthi uvikeleke kulobububi.
Singasicelela thina noma nomngani noma umlingani wethu osesimweni sokuba sengozini.
Into ebalulekile ngalo mkhuleko nakho konke, kungukukholwa okwenziwe ngalo, kumele sethembe ukuthi uma sicela, khona-ke impendulo yaphezulu iyohlala isifinyelela, noma ngabe isimo sinje kangakanani.
Oh San Ramón Nonato ekhangayo.
Ngiza kuwe ngigudluzwa ngumusa omkhulu obaphatha abanikela ngawo.
Yamukela, Wena oNgcwele wami, le minikelo engikunikeza yona ngokuzithandela, ukhumbula imikhuleko yakho efaneleke kakhulu, ukuthi ifinyelela kuNkulunkulu owenze umthengi okhethekile wabesifazane abakhulelwe.
Nakhu,, oNgcwele wami, omunye wabo othobeka ngaphansi kwesivikelo nokuvikelwa kwakho, ngiyanxusa ukuthi njengoba ukubekezela kwakho kuhlale kungaphungulwa kuzo zonke lezo zinyanga eziyisishiyagalombili lapho wabulawelwa khona umhlangano ngendlela ehlukile.
Nezinye izinhlungu ozichithe ngaphakathi komgodi omnyama kwathi ngenyanga yesishiyagalolunye washiya wonke lawo majele ekhululekile, ngakho-ke Ngcwele nommeli wami, ngicela ngokuthobeka ukuthi ungifinyelele kuNkulunkulu naseNkosini yami ...
Ukuthi isidalwa esifakwe ngaphakathi kokufakwa kwami ​​sigcinwe empilweni nasempilweni izinyanga eziyisishiyagalombili, elesishiyagalolunye siya ngokukhululeka ekukhanyeni kwalomhlaba, sikwenze wena, oNgcwele wami, ukuthi kanye nosuku umphefumulo wakho owaphuma ngalo Emzimbeni wakho bekuwusuku lwangeSonto, okuwusuku lwenjabulo nenjabulo, ukuze usuku lokuzalwa kwami ​​lube ngolweneliseka nenjabulo, ngazo zonke lezo zimo owaziyo ukuthi zilungele ngokuphelele inkazimulo enkulu kaNkulunkulu nawe nokusindiswa kwami. umphefumulo kanye nendodana yami.
La umkhuleko wabesifazane abakhulelwe de San Ramón Nonato kungenye yezindlela ezinhle kakhulu ongazithandaza.
Umvikeli othembekile wabaswele kakhulu, uSan Ramón Nonatos ongaziwa njengomsizi noma umsizi omkhulu wabesifazane abakhulelwe.
Siyazi ukuthi ukukhulelwa enye impilo yisimo esenza umuntu abe sengozini.
Kunoma yisiphi isimo esiphuthumayoUma kukhona ukukhulelwa okuphezulu noma enye inkinga, le saint iba yisiphephelo esikhulu.
Kuyo yonke inqubo yokutholwa komzimba kunconywa ukwenza umcimbi eSan Ramón Nonato kwabesifazane abakhulelwe nsuku zonke isonto lamaKhatholika lilungiselele lo mzuzu obalulekile empilweni yawo wonke umuntu.
Isidingo kuphela ukholo elicelwe ngalo.
Kuningi amakholwa athi alutholile usizo kulo msulwa ngesinye isikhathi lapho beyidinga.
Kusukela esemhlabeni, ubelokhu ekhathalela ukusiza abaswele noma kungakhathalekile noma kubeka engcupheni impilo yabo noma inkululeko kwinqubo.
Into abehlala enendaba nayo ukusiza nokugcina ukholo kuye wonke umuntu ahlangana naye.
Lokhu kuhlala kunjalo nanamuhla, noma sebedlulile eminyakeni eminingi emva kokushona kwakhe, iSan Ramón Nonato iyaqhubeka nokunikeza usizo olufika ngesikhathi kulabo abasesimweni sokuba sengozini engokomzimba noma ngokomoya.
Kodwa-ke, ukholo luyimfihlo eyenza umthandazo ngamunye ube namandla, ibhayibheli elingcwele lisikhuthaza ukuba sibuze ngezikhathi lapho sidinga usizo futhi sibonge nemikhuba enikezwe yona.
Into ebaluleke kunazo zonke thandaza umthandazo San Ramón Nonato ngokholo!